Aung Win Hein (Noble): 01/14/12
အမေး။ ။ “မိန်းမနဲ့ယောကျာ်း ဘာခြားနားသလဲ”?
အမေး။ ။"မှို့တစ်ပိဿာ နဲ့ ခဲတစ်ပိဿာ ဘာကွာခြားပါသလဲ?"
အဖြေ။ ။အဲဒီမှို့တစ်ပိဿာနဲ့ခဲတစ်ပိဿာကို တစ်ခါစီ အပေါ်ကိုမြှောက်လိုက်ပါ။
အမေး။ ။"အရင်းရှင်စံနစ်နဲ့ ဆိုရှယ်လစ်စံနစ် ဘာခြားနားသလဲ?"
အဖြေ။ ။“အရင်းရှင်စံနစ်မှာ လူက လူကိုခေါင်းပုံဖြတ်တယ်။
အမေး။ ။"ဆေးရုံနဲ့ထောင် ဘာကွာခြားသလဲ"
ဒါပေမယ့် ထောင်မှာ ကိုယ်နေရမယ့်သက်တမ်းကိုသိတယ်"